Izay ratsy fiandoha, tsy ho tsara fiafara… | NewsMada
Izay ratsy fiandoha, tsy ho tsara fiafara…
Hanao ahoana no hiafaran’izao tsy fitsaharan’ny fidangan’ny vidim-piainana izao, indrindra ny vary? Voalaza fa fanararaotana no fototr’izao, nefa tsy voasoroka. Mifampihinana an-toerana ny samy Malagasy, na tsy mahalala afa-tsy ny tenany ny isan-tsehatra, na ny tsirairay… Ao anaty fahasahirana lalina tsinona.
Hanao ahoana no hiafaran’izao tsy fandriampahalemana efa ho lava izao. Na ny samy mpitandro filaminana aza tato ho ato: misy mifampitifitra sy mifampihantsy ho samy mahery, raha vao misy mampifanditra. Mbola azo itokisana ho tandroka aron’ny vozona, raha samy izy aza mifanoto an-toerana?
Hanao ahoana no hiafaran’izao fitsaram-bahoaka izao? Mandeha ho azy, saika isan’andro, mahahenika ny an’i Madagasikara… Tsy hita izay tena afitsoky mpitondra fanjakana amin’izay vahaolana matotra, azo antoka, mahomby, maharitra. Fisehoana ho manao zavatra no be, famonoana afo, fialana andraikitra…
Hanao ahoana no hiafaran’ny fifandraisaina amin’ny vahiny amin’ny famelana ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany sy an-dranomasina… gaboraraka. Takalom-patsa, vidim-pihinanana. Tsy fantatra izay takalony: tsy misy fanazavana sy fangaraharana. Tonga hatramin’ny resaka hoe fivarotan-tanindrazana.
Hanao ahoana no hiafaran’ny ahiahy ny amin’ny mety hisian’ny mpitsoa-ponenana avy any ivelany, avela hiditra amin’ny nahiny na hitsofoka an-tsokosoko eto Madagasikara? Ny ahiahy tsy ihavanana. Misy tsy mazava be ihany tsinona ny amin’ny fifandraisana amin’ny firenena na mpitondra fanjakana sasany.
Hanao ahoana no hiafarana… Mbola azo tohizana lava ny amin’ny delestazy, ny kolikoly avo lenta, fanjakazakan’ny tsimatimanota, ny tsy fanjarian-tsakafo sy kere… Tomponandraikitra voalohany tsy afa-bela amin’izany rehetra izany ny mpitondra. Izay no nametrahana azy eo: hamaha olana, hanatsara ny fiainam-bahoaka…
Hanao ahoana no hiafarany? Misy farany ny zava-drehetra, ary arakaraka izay niandohany sy nandehanany ary nataony. Izay ratsy fiandoha, tsy ho tsara fiafara raha tsy manova famindra. Mby aiza? Baraingo io, fa tsy parapaingo.